Ka ekpughe ma debe Nzuzo | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 7, 2010 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Dika Google na Facebook na-aga n'ihu, ebe ahụ na- nnukwu nzuzo nchegbu a zụlitere na thentanetị niile… ma ọ bụ eziokwu.
Anyị nwere ike ịrụ ụka ogologo ụbọchị niile na otu saịtị ga-esi na-achịkọta, jiri ma ọ bụ na-ere data nkeonwe gị… ma ọ bụ ọbụlagodi ma ha ga-enwe ike… mana anyị agaghị efu nnukwu okwu gbara gburugburu nsogbu ahụ niile.
Enwere isi ihe ole na ole m kwenyere:
Ọ bụghị ọrụ nke a ụlọ ọrụ na-ekpebi otú iji gị ozi ozugbo ị na-blindly nye ya ha… na ọrụ dịịrị gị.
N'akụkụ aka nke ọzọ, ndị na-azụ ahịa amaghị etu ụlọ ọrụ si eji data ha eme ihe n'ezie - ya mere na ha na-ewe oke iwe mgbe ha chọpụtara na ejiri ya mee ihe ha na-atụghị anya ya. Peeji na ibe nke nhọrọ agbagha na nkwupụta nzuzo na-enweghị ihe ọzọ ma ọ bụ iwu na oghere nke Texas ị gafere abụghị azịza ya.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ na-anakọta data a, ọ bụ ọrụ ha ịnwe nchedo iji hụ na naanị ndị ọrụ ikike nwere ike ịnweta ya.
Kama ma ọ bụ ịrụ ụka banyere uru ma ọ bụ iwu iwu nke nzuzo, gịnị kpatara na anyị anaghị kama lekwasị anya na ụlọ ọrụ nzuzo ka gị na ụlọ ọrụ rụọ ọrụ iji mepụta usoro jikọrọ ọnụ iji kọwaa nke ọma etu esi etinye data nkeonwe gị. Ọtụtụ dị ka Creative Commons bụ azịza mmeghe na-emeghe maka njikwa ikike dijitalụ, anyị kwesịrị ịnwe Commons Commons na onye na-azụ ahịa nwere ike igwu ngwa ngwa ịghọta. Examplesfọdụ ihe atụ nwere ike ịbụ:
Ma ọ bụ nke ha a na-ere data ndị ọzọ.
Ma ọ bụ nke ha ana enweta data site na ndị ọzọ.
Ma ọ bụ nke ha a na-anakọta data na-enweghị aha ma kesara ndị ọzọ.
Ma ọ bụ nke ha a na-anakọta data na-enweghị aha ma kesaa n'ime.
Ma ọ bụ nke ha a na-eji data iji aka ya lekwasịrị anya.
Ma ọ bụ nke ha a na-eji data eme ihe na-enweghị aha ịchụ.
Ma ọ bụ nke ha eme ihe na-esoro onwe.
Ma ọ bụ nke ha eme ihe na-esoro anonymously.
Tinyere ma a na-enyocha ma kesasịa data ahụ, anyị nwere ike ịkọwa otu esi etinye ya n'ọrụ:
Na-ere maka uru.
Iji nye a pụrụ iche ahịa ahụmahụ.
Iji nye ahaziri iche na mgbasa ozi.
Iji melite ogo ngwaahịa niile.
Ndị ụlọ ọrụ nwere ike ịgafe data nkeonwe nke ndị na-azụ ahịa. Google n'ezie malitere nke a na ha Njikwa Akaụntụ njikwa, ebe m nwere ike inyocha ụfọdụ nke ozi, bibie m akụkọ ihe mere eme, ma ọ bụ ọbụna na-egbochi ha tinye n'ọrụ ya.
Dịka onye na-azụ ahịa na onye na-azụ ahịa, achọghị m Kwụsị ụlọ ọrụ site na iji data nkeonwe m. Ekwenyere m ka ụlọ ọrụ na-anọgide na-anakọta ozi gbasara m, ha nwere ike ijere m ozi karịa. Dịka ọmụmaatụ, echere m na ọ dị mma na Apple maara ọbá akwụkwọ egwu m, dịka ọmụmaatụ, ebe ha na-eme ụfọdụ nkwupụta ọgụgụ isi dabere na akụkọ ntolite m.
Tags: dataNche datanzuzo